အကောင်းဆုံး Alicoco Mineral Spiral Chute Concentrators ပေးသွင်းသူ
သက်သေပြနည်းပညာသည် centrifugal စီးဆင်းမှုကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏သိပ်သည်းဆအလိုက် မတူညီသောပစ္စည်းများကို အမျိုးအစားခွဲသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါ့ပါးသော အမှုန်အမွှားများသည် အပြင်ဘက်သို့ လွင့်ထွက်သွားပြီး အတွင်းပိုင်းတွင် ပိုလေးသော အမှုန်အမွှားများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရုပတ်များသည် တပ်ဆင်ရန် ရိုးရှင်းပြီး ၎င်းတို့၏ တာရှည် ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းဖြင့် ခွဲခြားထားပြီး၊ ရွေ့လျားမှု အစိတ်အပိုင်းများ မပါသော အငြိမ်စနစ်ကြောင့်၊ စွမ်းအင်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချထားသည်။
ALICCOCO မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ခရုပတ်အာရုံခံကိရိယာများကို ကျောက်မီးသွေး၊ ရွှေ၊ သံရိုင်းများ၊ ဓာတ်သတ္တုသဲများ၊ ပလက်တီနမ်နှင့် ခရုမ်း ပြုပြင်ရေးစက်ရုံများနှင့် အခြားတွင်းထွက်ပစ္စည်းများတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အက်ပ်လီကေးရှင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သော ခရုပတ်အရွယ်အစားနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများစွာကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်၏ အရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုသည် သုံးစွဲသူများကို စိတ်မပျက်စေရပါ။
1. အလုပ်လုပ်သည့်ချန်နယ်၏ အဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများကြားရှိ ချုပ်ရိုးများသည် အကျိုးပြုအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
အစိတ်အပိုင်းများ၏ splicing joints များသည် အလွန်တိကျပြီး slurry သည် ချောမွေ့စွာ စီးဆင်းနေသောကြောင့် beneficiation ကို မထိခိုက်စေပါ။မေးခွန်း- စက်တစ်ခုလုံး ပေါင်းခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ လိုအပ်ပါသလား။
2. စက်တစ်ခုလုံး ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ လိုအပ်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် USB flash drive ကို တပ်ဆင်ခြင်း၏ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းစဉ်၏ သရုပ်ပြဗီဒီယိုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဆိုက်ပေါ်ရှိ စည်းဝေးပွဲကို လမ်းညွှန်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အခြေခံအားဖြင့် ၂ နာရီအတွင်း စုဝေးရန် သင်ယူနိုင်သည်။
3. အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသလား။
သီးခြားအခြေအနေပေါ် မူတည်. ယေဘူယျအခက်အခဲများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် ရေရှည်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ဖောက်သည်များအား ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
1.Special material engineering plastic, wear-resistant, weather-resistant and non-deformed, which is the long service life ကိုအာမခံရုံသာမက မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
2. ၎င်းသည် ဓာတုအကျိုးခံစားခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အစားထိုးနိုင်ပြီး၊ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပအကျိုးခံစားခွင့် စက်ရုံများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ခေတ်နောက်ကျသော လုပ်ငန်းစဉ်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ကြီးမားသော စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိပါသည်။
3. အကျိုးခံစားခွင့် ခရုပတ် ချွဲ၊ ခွဲထားသော ပလပ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပေါ့ပါးသော အစိတ်အပိုင်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အဆင်ပြေစေကာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို သက်သာစေပါသည်။
4. ၎င်းသည် ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် ပုံမှန်အတိုင်း -20°C မှ +80°C အထိ လည်ပတ်နိုင်သည်။
ALICCOCO Gravity တွင်းထွက်ပစ္စည်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ခရုပတ်အာရုံစူးစိုက်မှု သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် အောင်မြင်သော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အဆင့်မြင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ မူပိုင်ခွင့်အဆင့်ကို အသီးသီး တီထွင်ခဲ့ပြီး 2.0 မီလီမီတာ ~ 0.02 မီလီမီတာ စပါးအရွယ်အစား သံ၊ တင်၊ အဖြိုက်နက်၊ Scheelite၊ တန်တလမ်၊ / Niobium, Gold, Coal, Ilmenite, Monazite, Rutile, Zircon, Quartz sand, Barite, Garnet, Rare Earth နှင့် အခြားသော သတ္တုများ / သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုဓာတ်များ လုံလောက်သော သီးခြားဆွဲငင်အား ကွာခြားချက်။ စက်ပစ္စည်းသည် သေးငယ်သောဧရိယာ၊ သေးငယ်သောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ တည်ငြိမ်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု၊ မြင့်မားသောကြွယ်ဝမှု၊ ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းမြင့်မားမှု၊ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေအတက်အကျတွင် ခိုင်ခံ့စွာလိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း။